Asia General Electric Holding Co.,Ltd-အဆောက်အဦးများအတွက် Marshalling Kiosk Panel | Vootee
Asia General Electric Holding Co.,Ltd-အဆောက်အဦးများအတွက် Marshalling Kiosk Panel
Asia General Electric Holding Co.,Ltd ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီ၍ အရည်အသွေးမြင့်မားသော သုံးစွဲသူများကျေနပ်နှစ်သက်သည့် ပစ္စည်းများကိုသာ အလေးထားထုတ်လုပ်ပေးထားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ Asia General မှ switchgear panels, power distribution transformer (liquid-filled and dry-type transformers) များကို ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့ Asia General Brand ကို သုံးကြစို့
This entry was posted in Business and tagged asia, electric, general, holding, marshalling. Bookmark the permalink.
← Aye Myat ChanThar Company Limited-လျှပ်စစ်အန္တရာယ်များကာကွယ်ရန် CHINT N13200 Air Circuit Breaker
Acoustic Architecture Co.,Ltd-Mineral Fiber Ceiling မျက်နှာကျက် →